Financial University ngaphansi Government of the Russian Federation
isifinyezo : FU
abafundi (ngu.) : 80000
Ungakhohlwa discuss Financial University under the Government of the Russian Federation
Financial University ubelokhu edume njalo ikhwalithi yefundo professional it enikeziwe. Sekungamashumi eminyaka INcwadi Yonyaka abaningi abaphothule zethu ziye zaba core kanye elite uhlelo wezwe ezezimali nezomnotho. Phakathi kwabo kukhona ongqongqoshe ezezimali kanye namaphini ezezimali izikhonzi USSR neRussia, osopolitiki, izifundiswa, osomabhizinisi, abaholi bamazwe commercial namabhange, izinkampani ezimbonini kanye zezimali, rectors emanyuvesi ezinkulu angaphandle.
impumelelo yabo kanye impumelelo kukhona ubufakazi best igunya Financial University, izinga kanye nokuncintisana izinhlelo zayo ukuqeqeshwa.
Iqembu le-Academy Alumni waqala isinqumo ukuze usethe i fund isipho nazo zonke izimali zalo ukuze isetshenziswe kuzo ukuze sikhokhele lolu izinhlelo zentuthuko isikhungo, ukwenza ngcono izakhiwo zayo, ukuqalisa amaphrojekthi ahlukahlukene ezintsha, ngcono ikhwalithi yefundo, njalo njalo.
Usihlalo iBhodi Endowment Fund sika Labaphathiswa A.L. Kudrin, Lisekela Prime Minister kanye noNgqongqoshe Wezezimali we Russian Federation.
Namuhla University Financial iyona zemfundo kanye nocwaningo eziyinkimbinkimbi ngobukhulu, omunye izikhungo Russia anothile zemfundo kanye nocwaningo emkhakheni ezezimali, credit, ukuphathwa kwezimali okunesigqi, umshuwalense, izintela kanye intela, accounting, analysis and audit, ubudlelwane yetemnotfo, analysis engozini, ukuphathwa crisis, izindlela zezibalo kwezomnotho, okungamele ukuphathwa komphakathi kanye kamasipala, umthetho futhi wezifundo zezombusazwe.
The Financial University sicuketse loku lonke inethiwekhi amagatsha zesifunda - abaxhumana namahhovisi omele kanye ezezimali nomnotho amakolishi. Inani yonyaka labafundi eNyuvesi ingaphezu 30 ayizinkulungwane, nge inqwaba ezinkulungwane ongoti ukuthatha professional ukuthuthukiswa izifundo.
Ukuze kube njalo in the lead, hhayi kuphela babhekane nezinselele isikhathi kodwa ukunquma ubizo izikhathi - lena umbono wethu ngempumelelo. lwezifundo Wethu basisebenzise ipumelelo isayensi kwezomnotho yesimanje kazwelonke angaphandle, futhi ubuchwepheshe bamuva emfundo kabanzi isicelo kule nqubo academic. Sisebenza ukuba ngcono kuloluhlelo lwemfundo yemphilo yonkhe kuhlanganise pre-university ukuqeqeshwa okukhethekile ukuze zesikole, ukuqeqeshwa for ongoti nge secondary education amakhono, university undergraduate impohlo kanye nezinhlelo ze-master), imfundo sebephothulile (PhD kanye zobudokotela izifundo), imfundo professional yesibili ephakeme (ezihlukahlukene ukuphinda uqeqesho kanye nentuthuko professional nezinhlelo ongoti), Tinhlelo temfundvo ibhizinisi.
orientation Engokoqobo Yezindaba imfundo kubaluleke kakhulu oyisazi sezomnotho namuhla. Yingakho-University ubeka ugcizelele sihileleke ohlotsheni odokotela abanolwazi ikhono abafundisayo. Heads of amabhange, umshwalense futhi audit izinkampani kanye izakhiwo ezinkulu zezimali kanye industrial ukusebenza nge abafundi bethu.
major State and Municipal Governance, Ukuphatha iphrojekthi
Faculty of Accounting kanye Labacwaningi Bamabhuku
Provides training in Economics with qualification (degree) Bachelor of Economics, major Accounting, Analysis Audit
Faculty of Law more
20. “Isayensi Yezepolotiki”
41. “Izilimi zangaphandle”
47. Higher School of Public Ukuphatha: “Public Service”
48. Institute of Business Administration futhi Business “Innovative Ukuphathwa”
54. “Imfundo engokomzimba”
1992 – the Finance Academy under the Government of the Inhlangano yase Russia
kusukela 14.07.2010 – the Financial University under the Government of the Russian Federation
Uyafuna discuss Financial University under the Government of the Russian Federation ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Mordovia State University kwaseSaransk
Siberian State Medical University saseTomsk